Igbo, John: Lesson 040 - Nri puku mmadụ ise (Jọn 6:1-13) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 040 (Feeding the five thousand)
B - JIZỌS BU UBU NDU (Jọn 6:1-71)
1. Nri puku mmadụ ise (Jọn 6:1-13)
Na Jerusalem, Jisos gosiputara chi ya n'ememe Sabbath site n 'ogwugwo, negosi uzo di n'etiti ima Chineke na echiche efu nke ndi dere akwukwo. Ha kpebiri imebi ya na ịkpọasị. mmo nso duuru Jizos n'èzí gaa Galili, ebe n'onod n'etiti ya na ndiiro ya gaabi isi. Ọtụtụ ìgwè dị n'ebe ugwu nọgidere na-eso ya n'ebe ọ bụla ọ gara.
1 Mb͕e ihe ndia gasiri Jisus we gabiga n'ofè oké osimiri Galili, nke anākpọ Oké Osimiri Tiberias. 2 Oké ìgwè madu we so Ya, n'ihi na ha huru ihe-iriba-ama-Ya nile nke Ọ nēme ndi aru nādighi ike. 3 Jisus we rigo n'ugwu ahu, Ya na ndi nēso uzọ-Ya we nọdu n'ebe ahu. 4 Ma ememe ngabiga, bú ememe ndi-Ju, di nso.
Kemgbe ịba mba Kraịst nke ndị Legalist na Jerusalem, ha gbaara ya izu ma legide ya anya. Ma oge awa ya abiaghi, o wezugara onwe ya site n'òtù nke Sanhedrin laghachi Galili. Ka anyị na-agụ na ozioma atọ ndị mbụ ọ rụrụ ọtụtụ ihe ịrịba ama n'ebe ahụ. E nwere oké ọgba aghara na akụkọ banyere ọbịbịa ya, ma a dịghị echegbu Jisos ma ọ bụ weghara ya n'ihi na Ọ maara na uche ahụ ọ na-ahụ na isi obodo ahụ ga-abanye n'ime obodo ndị ahụ, a ga-amagbukwa ya n'ebe ahụ. N'ihi ya, ọ hapụrụ Golan, n'ebe ọwụwa anyanwụ Jọdan, ka ya na ndị na-eso ụzọ ya nọrọ. Otú ọ dị, ìgwè mmadụ ahụ agụụ na-agụ okwu ya, na-achọ inweta ọrụ ebube ya. N'afọ ahụ Jizọs agaghachighị Jerusalem maka Ememe Ngabiga maka awa nke ọnwụ ya ka ga-abịa. O mere ememe ahu na ndi mmadu gbara ya gburugburu, ihe nnochite anya Ememe Ngabiga; site n'igosi aka oriri oriri nke elu igwe ebe Onye nzoputa gagonyere ndi mo ya n'inwe obi uto.
5 Ya mere, mgbe Jizos leliri anya ya, ma hụ na oké ìgwè mmadụ na-abịakwute ya, ọ sịrị Filip: "Olee ebe anyị ga-azụ achịcha, ka ndị a wee rie?" 6 O kwuru ihe a iji nwalee ya, n'ihi na ya onwe ya maara ihe ọ ga-eme. 7 Filip zara Ya, si, Iri achicha iri-na-ise abughi ha, ka madu ọ bula we nweta nke-ntà. 8 Otù onye nime ndi nēso uzọ-Ya, bú Andru, nwa-nne Saimon Pita, we si ya, lee, ndi nwere ob͕e achicha barley ise na azù abua: ma gini bu ndia n'etiti ìgwè madu ndia? 10 Jisus siri, Menu ka ndi Israel nọdu ala. Ma ọtutu ahihia di n'ebe ahu. Ndị ikom ahụ wee nọdụ ala, ihe dị ka puku mmadụ ise. 11 Jizos we were ob͕e achicha ahu; mb͕e O kelesiri Chineke, O we kesaara ndi nēso uzọ-Ya, nye kwa ndi nēso uzọ-Ya ndi nọduru ala; otú ahụkwa ka azụ dị ka ha chọrọ. 12 Mgbe ha juru, ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: "Kpọkọtanụ ihe ndị fọdụrụ, ka ihe ọ bụla funahụ unu." 13 Ya mere, ha chịkọtara ha ma tụjie nkata iri na abụọ n'ime achịcha ndị e ji achicha ọka bali ise, ndị fọdụrụ rie ya.
Mgbe Jisos huru ka ndi mmadu na-abia nso, o weliri anya ya lee Nna ya nke eluigwe inye ya otuto na otuto na inye Chineke ndi na agu ihe. Na nke a ọrụ ebube malitere. Nna nyere Ọkpara ahụ ọrụ nke ga-ekpuchi obi.
Nke mbụ, Jizọs nwalere ndị na-eso ụzọ ịhụ ma okwukwe ha ọ na-etolite ma ọ bụ na ejidela ha na ịhụ ihe onwunwe n'anya ma na-eche echiche nke ụwa mgbe ọ jụrụ Philip banyere isi iyi maka nri. Anyị ga-eche banyere ndị na-eme achịcha ma Jizọs chere banyere Nna ya. Anyị na-eche banyere ihe gbasara ego na ụgwọ dị elu nke ndụ ma Jizọs chere banyere Onye inyeaka Chineke. Filip chere ozugbo banyere ego a ga-eweta kama ịgbanwere okwukwe. Onye ọ bụla nke na-ele ego anya anaghị ahụ ohere nke Chineke. Nchịkọta nke ndị na-eso ụzọ bụ ihe ezi uche dị na ya: E nweghị ndị na-eme achịcha ma ọ bụ ntụ ọka ntụ ọka dị nso ma ọ dịghị oge ime achịcha. Ma ndị mmadụ nọ n'ebe ahụ, agụụ na-agụ mgbe ogologo oge nke ige Onyenwe anyị ntị.
Na mberede, mmụọ ahụ kpaliri Andrew ka ọ hụrụ otu nwatakịrị nwere ogbe achịcha ise na azụ abụọ. Ọ kpọrọ nwa okoro ahụ, "Biko, nye ihe i nwere nke achicha na azu." Andru nwere àgwà ya, ebe ọ maara na ego anaghị ezu. Ya mere, Jisos duuru ndi neso uzo ahu ikwenye na ha adighi ike n'ihi na ha amagh ihe ha ga eme, ma obu uche nke Chineke na ihe Jisos gaje ime.
Jizọs nyere ndị na-eso ụzọ iwu ka ha hazie ndị nọ ebe ahụ ma ha nọdụ ala dị ka à ga-asị na ọ bụ oriri nnukwu oriri.
Ala ahịhịa na-ekpuchi ala nke nwere ike ịbụ ihe nnọchianya nke okwukwe na-etolite na ìgwè mmadụ ahụ. Mmadụ ise na ndị inyom na ụmụaka bụ ọnụ ọgụgụ buru oke ibu. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha ahụbeghị Jizọs n'ihu ma ọ bụ ọrụ ya, kama ha nọdụrụ ala n'okwu ya.
Jide nwayọọ Jizọs weere achịcha ahụ wee kpebisie ike igosi ike ike ya n'oge a. O debere n'ihu Nna ya ogbe achicha ise na-ekele Ya maka ha. O kweere na Chineke ga-agọzi obere ego ahụ ma mee ka ọ na-erubiga ókè. Ekele maka ndị ole na ole na nsọpụrụ ya maka Nna bụ ihe nzuzo nke ọrụ ebube a. Ùnu ji obi ekele nakwere obere ego nke Chineke na-enye ma ọ bụ ka unu were ya ma mee mkpesa? Ị na-ekerịta obere ihe na ndị enyi gị? Jizọs achọghị ọdịmma onwe ya naanị; Ịhụnanya Chineke nọ na ya na Ya ma sọpụrụ Nna ya ma kesaa ngọzi Chineke nye mmadụ niile.
A rụrụ ọrụ ebube a n'akwukwọ ozioma anọ n'enweghi ike. O yikariri ka ọ dịghị ma e wezụga ndị nọ ọdụ n'akụkụ Kraịst hụrụ ya ma chọpụta na ka ọ na-agbaji achịcha ndị ọzọ pụtara, ihe ndị ahụ yiri ka ọ na-adịghị agwụ agwụ. Ha na-aga n'ihu ma na-ekesara mmadụ nile ka onye ọ bụla ga-ewe ego ọ chọrọ. Nke a bụ ihe ịrịba ama nke amara. Chineke naenye mgbaghara na mmuo n'enweghi ihe. Were ihe ị chọrọ; kwenyere n'ókè ị nwere ike. Nye ndị ọzọ ngọzi. Gọzie ha dịka a gọzila gị ma si otú ahụ ị ga-abụ ngọzi nke ndị ọzọ.
Na Cana, Jizọs gbanwere mmiri ghọọ mmanya, na Golan ọ gbanwere ogbe achịcha ise ahụ maka mmadụ ise. N'ụzọ dị ịtụnanya, a hapụrụ ihe fọdụrụ na njedebe nke nri karịa ụba na mbido! Ọnụ ọgụgụ nke nkata ndị jupụtara na ya bụ iri na abụọ na Jizọs nyere iwu na ọ dịghị ihe ga-ala n'iyi. Ọ bụ ihe ihere na taa ndị mmadụ na-atụfu nri ha na-eri n'ime ihe mkpofu, n'agbanyeghị na ha maara na oge ọ bụla ọtụtụ puku mmadụ na-anwụ n'ihi ụnwụ. Ekwela ka ngọzi gi nye gi site na nkpa obi gi, kama ichikota ihe omuma amara. Ị ga - enweta ihe kariri ị nwere ike ijide amara Chineke.
Jiri nlezianya lee anya nwatakiri nwoke ahụ mgbe Jizọs were achịcha ahụ n'aka ya wee hụ achịcha ndị ahụ na-amụba. Ọ ghaghị ịmeghe anya ya na ihe ijuanya. Ọ dịghị mgbe ọ ga-echezọ ọrụ ebube a.
EKPERE: Daalụ, Onyenwe anyị Jizọs, maka ndidi na ịhụnanya gị. Gbaghara anyị enweghị okwukwe. Kụziere anyị ka anyị gbanwee ka ị nwee nsogbu, ma ghara ịdabere n'ikike anyị, ma dabere na akụ gị. Anyị na-ekele gị maka akụ ime mmụọ ị nyere anyị, ọbụna maka obere ihe onwunwe anyị nwere. Ị ga-agọzi anyị n'ụbọchị ihe onwunwe anyị dị ala, ma nyere anyị aka ịghara ịlafu ihe ọ bụla ma ọ bụ ileghara onyinye anyị anya.
Gịnị bụ ihe nzuzo nke nri nke puku mmadụ ise?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:02 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)